?Waa been in shirka ammaankiisa ay sugayaan AMISOM, shirka nabadgalyadiisa guddiyo gaar ah ayaa sugaya, ammaankuna waa mid illaa xad la isku halayn karo? Gen. Ilkajiir – Radio Daljir
?Waa been in shirka ammaankiisa ay sugayaan AMISOM, shirka nabadgalyadiisa guddiyo gaar ah ayaa sugaya, ammaankuna waa mid illaa xad la isku halayn karo? Gen. Ilkajiir
Garowe, Dece, 22 ? Wasiirka arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo hormarinta reer-miyiga dawladda Puntland General: C/llaahi Axmed Jaamac ?Ilkajiir? ayaa shaaca ka qaaday in nabad-galyada shirka Garowe aysan sugaynin ciidanka AMISOM, arrintaasina ay tahay mid been abuur ah oo la isla dhexmaray, waxaana uu intaasi ku daray inaysan illaa xilligaan arag ciidan AMISOM ka tirsan oo jooga Garowe, tan iyo markii uu furmay shirku.
Wasiirku waxaa uu mahad-ballaaran u jeediyay laamaha kale-duwan ee ammaanka, oo uu ku ammaanay doorka ay ka qaateen sugida nabad-galyada Puntland. Waxaa uu mudane ?Ilkajiiir? sheegay Puntland in la isku halayn-karo ammaankeeda ayna ku filantahay, iyadoon cid-kale gacan iyo garab ka helin.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo hormarinta reer-miyiga dawladda Puntland General C/llaahi Axmed Jaamac ?Ilkajiir? waxaa mar uu kaftamayay yiri ?Dad-badan ayaa huradadii ku daahay saakay, maxaa yeelay ma jirin wax rasaas iyo madaafiic ah oo ay maqleen, taasina waxay muujinaysaa ammaanka ka jira Puntland?.
Dhinaca kalena, wasiirka amniga dawladda Puntland Khaliif Ciise Mudan oo waraysi gaar ah siiyay radio Daljir ayaa si qeexan uga hadlay habka ay u sugeen nabad-galyada Puntland, gaar ahaan magaalada Garoowe iyo goobta shirka, wasiirku waxaa uu carabka ku dhuftay in la qab-qabtay rag badan oo lala xiriirinaayo falal amniga lidi ku ah, kuwaasoo siyaabo kale duwan ciidanku u soo qabteen.
Ugu dambeyntii mar Radio Daljir ay wax-ka waydiisay aragtida Puntland kaga aadan hadal dhawaan kasoo yeeray kooxda Al-shabaab oo ay ku hanjabeen in shirka Garoowe ay qaraxyo ka gaysan-doonaan ayuu wasiirku ka gaabsaday arrintaasi inuu ka hadlo, waxaana uu tilmaamay wax-ficil ah inaysan Al-shabaab ka gaysan karin deegaannada Puntland.